ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ကိုမှ မဖတ်ဘဲ ကျော်သွားရင် မင်းဘယ်လိုပို့စ်မျိုးကို ဖတ်ချင်တာလဲ? - CeleLove
July 14, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်ပညာပေး 0
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ စာကိုမှ မဖတ်ပဲ ကျော်သွားရင် မင်းဘယ်လိုစာမျိုးကို ဖတ်ချင်တာလဲ?ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မင်း ဘ၀ အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါ လိမ့်မယ် …။
သူတို့ဘ ၀ကိုသူတို့ မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ လူ တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး …။
အကယ်၍ သင်လည်း အဲလိုပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ- ချမ်းသာမှ၊ အောင်မြင်မှ၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တွေ အများကြီးရမှ၊ နာမည်ကျော်ကြားမှ၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစု ရှိမှ ပျော်ရွှင် မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် …။
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ မှားနေပါပြီ …။
နောက်တစ်ကြိမ် “ ငါ့ ဘ၀ ကိုငါ မုန်းတယ် ” လို့ ပြောတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် မေးကြည့် လိုက်ပါအုံး …။
ဒါဆို ငါသေ ရင် ပိုကောင်းမလား-လို့
ဒီ စကား က ကြမ်းတမ်းချင် ကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တွေးရုံလေးပဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ …။
သင် အသက်ရှင် နေသမျှ သင်ဟာ ပျော်ရွှင် နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘ၀ ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး လည်း အမြဲတမ်း ရှိ နေပါတယ် …။
ဟောဒီမှာ နည်းလမ်း(၁၀)ခု ပေးလိုက်ပါမယ် …..
(၁) ဘ၀ရဲ့ ကောင်းတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ အာရုံစိုက် လိုက်ပါ ”
ဘ၀ နဲ့ပတ်သက်လို့ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို တစ်ခုမှ မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မှာ အဆိုးမြင် အတွေး တွေ ရှိနေဆဲပဲ။ အဲဒီ အတွေး တွေကို ထွက်သွားခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်ဘ၀ရဲ့ ဘယ်အရာတွေကို သင် တကယ်မြတ်နိုးသလဲ?
(၂) မကျေမနပ်မဖြစ်ပါနဲ့ ”
ဘ၀ကို သင်မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ အဲဒါကို တစ်ချိန်လုံး ပြောနေဖို့မလိုပါဘူး။ သင့်ဘ၀ကိုသင် မချစ်ဘူး လို့ ပြောလေလေ၊ အဲဒီ အနှုတ် လက္ခဏာ အတွေး တွေက ပိုအားကောင်းလာလေလေပါပဲ။
(၃) သင့်ရဲ့ဘ ၀ကို အခြားသူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ ”
သင့်ရဲ့ဘ၀ ဟာ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဘ၀ နဲ့ ဘယ်တော့မှ တစ်သမတ်တည်း မတူနိုင်ပါဘူး ကိုယ် မတတ်နိုင်တဲ့ အ၀တ်အစား ၀တ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ကား စီးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မနေနိုင်တဲ့အိမ်မျိုးမှာ နေသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါပဲ။ဒါကို ကျင့်သားရအောင်လုပ်ပါ။ နေသားကျသွားပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှ ပြဿနာ မရှိတော့ပါဘူး။ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် တွန်းအား တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်မှာမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။
(၄) သင်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေကို ပိုလုပ်ပါ ”
သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေမယ့် အလုပ် တစ်ခုခုကို အနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ် နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။
(၅) ဘ၀ဟာ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပါ ”
သင့်မှာ အလုပ် ကောင်းကောင်း မရလို့၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးက သင်မျှော်မှန်းထားသလေက် အဆင်မပြေလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဟာ အခြေအနေတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံပါ။ အရာအားလုံးဟာ ပြောင်းလဲကြပါတယ်။
(၆) အကောင်းမြင် တတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်း ပါ ”
သင် အမြဲ ပေါင်းသင်း နေတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေ၊ အကောင်းမြင်တတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင် သင်လည်း ပိုပြီးပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ သင့် အပေါင်းအသင်း တွေဟာ အဆိုးမြင် တတ်သူတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ အတွေး တွေဟာ သင့်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ဂရုပြုပါ။
(၇) အခြားသူတွေကို ကူညီ ပါ ”
အခြားသူတွေကို များများ ကူညီ လေ၊ သင့်ရဲ့ဘ၀ နဲ့ပတ်သက်လို့ ညည်းတွားနေဖို့ အချိန်မရလေပါပဲ။ ဒါတင်မကပါဘူး၊ လူတွေကို ကူညီခြင်းက သင့်ကို တကယ်ပဲ ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။
(၈) TV သိပ်မကြည့်ပါနဲ့ ”
ကြော်ငြာ တွေရဲ့အလုပ် က – သင့်ဘ၀ဟာ မပြည့်စုံဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တယ်၊ အဲလိုပြုလုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အ၀တ်အစား တွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ၊ ကားတွေကို ၀ယ်ရမယ်လို့ သင့်ကို ပြောဖို့ပါပဲ။ အဲဒီ အလိမ်အညာ တွေကို လက်မခံမိပါစေနဲ့။
(၉) သေးငယ်တဲ့အရာလေးတွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုး ထားတတ်လာပါစေ ”
ဘဘာဝလောကကြီးကို အသေအချာ ကြည့်ဖူးပါသလား။မိုးကောင်းကင် ၊ တိရစ္တာန်လေးတွေ၊ အပင်တွေနဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ။ဒါတွေဟာ တကယ်ကို လှပပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ဘ၀ကို သူ့အရှိအတိုင်း ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင် သင်ယူပါ။
(၁၀) ဘ၀ရဲ့သာယာ ပျော်ရွှင်မှု တွေ၊ အခွင့်အရေး တွေကို ရယူပါ ”
အခု သင့်မှာ အခွင့်အရေး ရှိပါသေးတယ်- ဘ၀ ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ရှာဖွေပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ၊ ပြီးတော့ ဘ၀ ကို ချစ်မြတ်နိုးပါ။
ဒီလောကျကောငျးတဲ့ ပို့ဈကိုမှ မဖတျဘဲ ကြျောသှားရငျ မငျးဘယျလိုပို့ဈမြိုးကို ဖတျခငျြတာလဲ?
ဒီလောကျကောငျးတဲ့ စာကိုမှ မဖတျပဲ ကြျောသှားရငျ မငျးဘယျလိုစာမြိုးကို ဖတျခငျြတာလဲ?ဖတျကွညျ့လျိုကျပါ မငျး ဘဝ အတှကျ အထောကျအကူ ပွုနိုငျပါ လိမျ့မယျ …။
သူတို့ဘ ဝကိုသူတို့ မုနျးတယျဆိုတဲ့ လူ တှေ ရှိပါတယျ။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိနတေဲ့အရာတှနေဲ့ မပြျောရှငျနိုငျကွပါဘူး …။
အကယျ၍ သငျလညျး အဲလိုပဲဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ သငျဟာ- ခမျြးသာမှ၊ အောငျမွငျမှ၊ မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျး တှေ အမြားကွီးရမှ၊ နာမညျကြျောကွားမှ၊ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ မိသားစု ရှိမှ ပြျောရှငျ မယျဆိုတဲ့ လူတှထေဲက တဈယောကျ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ …။
စိတျမကောငျးစရာပါပဲ။ အဲလိုဆိုရငျတော့ မှားနပေါပွီ …။
နောကျတဈကွိမျ “ ငါ့ ဘဝ ကိုငါ မုနျးတယျ ” လို့ ပွောတဲ့အခါ သငျ့ကိုယျသငျ မေးကွညျ့ လိုကျပါအုံး …။
ဒါဆို ငါသေ ရငျ ပိုကောငျးမလား-လို့
ဒီ စကား က ကွမျးတမျးခငျြ ကွမျးတမျးလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ တှေးရုံလေးပဲ တှေးကွညျ့လိုကျပါ …။
သငျ အသကျရှငျ နသေမြှ သငျဟာ ပြျောရှငျ နိုငျပါတယျ။ ပွီးတော့ ဘဝ ကို ပိုကောငျးအောငျလုပျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး လညျး အမွဲတမျး ရှိ နပေါတယျ …။
ဟောဒီမှာ နညျးလမျး(၁၀)ခု ပေးလိုကျပါမယျ …..
(၁) ဘဝရဲ့ ကောငျးတဲ့အရာတှအေပျေါမှာ အာရုံစိုကျ လိုကျပါ ”
ဘဝ နဲ့ပတျသကျလို့ ကောငျးတဲ့အရာတှကေို တဈခုမှ မစဉျးစားနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့မှာ အဆိုးမွငျ အတှေး တှေ ရှိနဆေဲပဲ။ အဲဒီ အတှေး တှကေို ထှကျသှားခှငျ့ပေးလိုကျပါ။ သငျ့ဘဝရဲ့ ဘယျအရာတှကေို သငျ တကယျမွတျနိုးသလဲ?
(၂) မကမြေနပျမဖွဈပါနဲ့ ”
ဘဝကို သငျမခဈြဘူးဆိုရငျတောငျမှ အဲဒါကို တဈခြိနျလုံး ပွောနဖေို့မလိုပါဘူး။ သငျ့ဘဝကိုသငျ မခဈြဘူး လို့ ပွောလလေေ၊ အဲဒီ အနှုတျ လက်ခဏာ အတှေး တှကေ ပိုအားကောငျးလာလလေပေါပဲ။
(၃) သငျ့ရဲ့ဘ ဝကို အခွားသူတှနေဲ့ မနှိုငျးယှဉျပါနဲ့ ”
သငျ့ရဲ့ဘဝ ဟာ တခွားတဈယောကျယောကျရဲ့ဘဝ နဲ့ ဘယျတော့မှ တဈသမတျတညျး မတူနိုငျပါဘူး ကိုယျ မတတျနိုငျတဲ့ အဝတျအစား ဝတျတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျမစီးနိုငျတဲ့ကား စီးတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျမနနေိုငျတဲ့အိမျမြိုးမှာ နသေူတှကေတော့ ကိုယျ့အနားမှာ အမွဲတမျး ရှိနမှောပါပဲ။ဒါကို ကငျြ့သားရအောငျလုပျပါ။ နသေားကသြှားပွီဆိုရငျတော့ ဘာမှ ပွဿနာ မရှိတော့ပါဘူး။ တခွားတဈယောကျယောကျရဲ့ အောငျမွငျမှုကိုသငျ့ကိုယျပိုငျအောငျမွငျမှုရရှိဖို့အတှကျ တှနျးအား တဈခုအဖွဈ အသုံးခနြိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သငျ့မှာမရှိတဲ့အရာတှအေတှကျတော့ ဘယျတော့မှ စိတျမကောငျးမဖွဈပါနဲ့။
(၄) သငျတကယျ ခဈြမွတျနိုးတဲ့အရာတှကေို ပိုလုပျပါ ”
သငျ့ကို ပြျောရှငျစမေယျ့ အလုပျ တဈခုခုကို အနညျးဆုံးတဈခုလောကျဖွဈဖွဈ နတေို့ငျးလုပျပါ။
(၅) ဘဝဟာ အမွဲတမျးပွောငျးလဲနတေယျဆိုတာ အသိအမှတျပွုပါ ”
သငျ့မှာ အလုပျ ကောငျးကောငျး မရလို့၊ ဒါမှမဟုတျ ငှရေေးကွေးရေးက သငျမြှျောမှနျးထားသလကျေ အဆငျမပွလေို့ စိတျဓာတျကနြတေယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ လကျရှိအခွအေနဟော အခွအေနတေဈခုမြှသာဖွဈတယျလို့ လကျခံပါ။ အရာအားလုံးဟာ ပွောငျးလဲကွပါတယျ။
(၆) အကောငျးမွငျ တတျသူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျး ပါ ”
သငျ အမွဲ ပေါငျးသငျး နတေဲ့သူတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဂရုစိုကျပါ။ ပြျောရှငျတဲ့သူတှေ၊ အကောငျးမွငျတတျသူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးမယျဆိုရငျ သငျလညျး ပိုပွီးပြျောရှငျလာပါလိမျ့မယျ။အကယျ၍ သငျ့ အပေါငျးအသငျး တှဟော အဆိုးမွငျ တတျသူတှဖွေဈနမေယျဆိုရငျတော့ အဲဒီ အတှေး တှဟော သငျ့ကိုလညျး လှမျးမိုးလာနိုငျတယျဆိုတာ ဂရုပွုပါ။
(၇) အခွားသူတှကေို ကူညီ ပါ ”
အခွားသူတှကေို မြားမြား ကူညီ လေ၊ သငျ့ရဲ့ဘဝ နဲ့ပတျသကျလို့ ညညျးတှားနဖေို့ အခြိနျမရလပေါပဲ။ ဒါတငျမကပါဘူး၊ လူတှကေို ကူညီခွငျးက သငျ့ကို တကယျပဲ ပြျောရှငျစနေိုငျပါတယျ။
(၈) TV သိပျမကွညျ့ပါနဲ့ ”
ကွျောငွာ တှရေဲ့အလုပျ က – သငျ့ဘဝဟာ မပွညျ့စုံဘူး၊ ဒါပမေဲ့ အဲဒါကို ကောငျးမှနျအောငျ ပွုလုပျနိုငျတယျ၊ အဲလိုပွုလုပျဖို့ သူတို့ရဲ့ နောကျဆုံးပျေါ အဝတျအစား တှေ၊ အသုံးအဆောငျတှေ၊ ကားတှကေို ဝယျရမယျလို့ သငျ့ကို ပွောဖို့ပါပဲ။ အဲဒီ အလိမျအညာ တှကေို လကျမခံမိပါစနေဲ့။
(၉) သေးငယျတဲ့အရာလေးတှအေပျေါမှာ တနျဖိုး ထားတတျလာပါစေ ”
ဘဘာဝလောကကွီးကို အသအေခြာ ကွညျ့ဖူးပါသလား။မိုးကောငျးကငျ ၊ တိရစ်တာနျလေးတှေ၊ အပငျတှနေဲ့ မွဈခြောငျးတှေ။ဒါတှဟော တကယျကို လှပပါတယျ။ အဲဒါတှကေို ရှာဖှကွေညျ့ပါ။ ပွီးတော့ ဘဝကို သူ့အရှိအတိုငျး ခဈြမွတျနိုးတတျအောငျ သငျယူပါ။
(၁၀) ဘဝရဲ့သာယာ ပြျောရှငျမှု တှေ၊ အခှငျ့အရေး တှကေို ရယူပါ ”
အခု သငျ့မှာ အခှငျ့အရေး ရှိပါသေးတယျ- ဘဝ ရဲ့ကောငျးတဲ့အရာတှကေို ရှာဖှပေါ၊ ပြျောရှငျပါ၊ ပွီးတော့ ဘဝ ကို ခဈြမွတျနိုးပါ။
ဖြူဖွေး ၀င်းမွတ်နေတဲ့ ရွှေရင်အစုံကို အတိုင်းသားမြင်တွေ့ရစေမယ့် သင်ဇာရဲ့ အမိုက်စား Video လေး …..